‘हेर्दाहेर्दै आँखाकै अगाडी मेरो साथीलाई फेवातालले डुबायो’ रुँदै साथी भन्छन्,‘फर्किएर आउँदैनन् भनेर नभनिदिनुस् न’ (भिडियो सहित) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/‘हेर्दाहेर्दै आँखाकै अगाडी मेरो साथीलाई फेवातालले डुबायो’ रुँदै साथी भन्छन्,‘फर्किएर आउँदैनन् भनेर नभनिदिनुस् न’ (भिडियो सहित)
‘हेर्दाहेर्दै आँखाकै अगाडी मेरो साथीलाई फेवातालले डुबायो’ रुँदै साथी भन्छन्,‘फर्किएर आउँदैनन् भनेर नभनिदिनुस् न’ (भिडियो सहित)
पोखरा । पोखरा महानगरपालीका १८ को खपौंदिमा साथीहरुसंग रामाईलो गर्न र बाहीर नै लन्च गर्नकोलागी आएका सुरज सदाकालागी अस्ताएका छन् । २३ वर्षीय सुरज नगरकोटी अब यो संसारमा कहिल्यै पनि फर्किएर आउदैनन् । किनकी उनी पोखराको फेवातालमा सधैंकालागी डुबेका छन् ।
सुरज नगरकोटी साथीहरुसंग रमाईलो गर्नमा निकै रमाउने र खुशी हुने मान्छे थिए । साथीहरुसंग घुम्ने, रमाउने भनेपछि उनी हुरुक्कै हुन्थे । यस्तो उनका साथीहरुको भनाई छ । आज भन्दा १ दिन अघि पनि उनी साथीहरुसंग गेटटुगेदर गर्न घरबाट निस्किएका थिए । उनीहरुको त्यो दिनको खानाको कार्यक्रम बाहीर नै तय भएको थियो ।
सोही पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार सुरज र उनका केही साथीहरु फेवातालको छेउमा रहेको रेष्टुरेन्टमा पुगेका थिए । उनका रुँदै गरेका साथी र देख्नेहरुका अनुसार सुरज पौडी खेल्न नजान्ने रहेनछन् । उनी मजाले नै पौडी खेल्न जान्ने रहेछन् । फेरी पनि किन डुबायो त फेवातालले उनलाई ? यो प्रश्न धेरैको मनमा हुन सक्छ ।
शुरुमा त सुरज र उनका केही साथीहरुसंगै फेवातालको छेउमा नै पौडी खेलेर फर्किएका रहेछन् । तर सुरज भने साथीहरुसंग खेलि सकेपछि पनि फेरी अर्को पटक पौडी खेल्न गएपछि उनी फेवातालमा सधैंकालागी डुबेका रहेछन् । एकचोटी पौडि खेलेर फर्किएको सुरज अर्कोचोटीमा कसरी डुबे त ? भन्ने जिज्ञासालाई रेस्क्यू टिमले मेटाएको छ ।
जब हेर्दाहेर्दै सुरज फेवातालमा डुबे । निकै बेरसम्म उनी न बाहीर आए न त हात नै उचाले त्यसपछि तुरुन्तै रेस्क्यू टिमलाई खबर गरेपछि उक्त रेस्क्यू टिमले एकैचोटी उनको लासलाई फेवातालको पानीबाट बाहीर निकाले । त्यो देखेर त्याहाँ उपस्थित सबैजना भावुक भएका थिए भने उनीसंग खाना खान गएका साथी भने डाको छोडेर रुन थाले ।
जब रेस्क्यू टिमले भन्यो,‘सुरज पानी भित्रको जालमा अड्कीएका रहेछन् त्यसैले उनले आफुलाई त्यो जालबाट छुटाउन सकेनन् । र उनी बचेनन् ।’ यो कुरा सनेर उनका साथी झनै भक्कानिदै रुन थाले । जब उनले रुँदै भने,‘यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । यो के भयो । उनको परिवारलाई कसैले भनिदिनुस् न ।’ साथी रोएको देखेर त्याहाँ उपस्थित सबैको आँखा रसायो ।
जब त्याहाँ उपस्थित भएकाहरुले भने,‘कठै बिचार हेर्दाहेर्दै डब्यो नि, अब फर्किएर कहिल्यै आउँदैन’ यो सुनेर रोई रहेका सुरजका साथीले रुँदै भने,‘फर्किएर आउँदैनन् भनेर नभनिदिनुस् न’ उनको साथीको यो भनाईले सबैको मन भक्कानियो । सुरजको एक वर्ष पनि नपुगेको छोरी छिन् रे । त्यो अबोध नानीको कुराले घटनालाई झनै सम्बेदनशील बनाएको छ ।
‘आमा गुमाएका जुम्ल्याहालाई पाल्छौ’, भन्दै टिकटकबाट हिट भएका जुम्ल्याहा दिपा-दमन्ता भेट्न गए । सहयोग दिँदा दुख सम्झेर रोए (भिडियो हेर्नुस)